February 28, 2019 marqaan 1
Waxaa goordhow Qarax xoogan Caawa laga maqlay qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya gaar ahaan Nawaaxiga Wadada Maka Al Mukarama. Qaraxa ayaa la sheegay in loo adeegsaday Gaari laga soo buuxiyay Waxyaabaha Qarxa,
Daawo Video:Axmed Karaash oo Dil Toogasho Ugu Habjabey Cida Kufsiga Caaisha Lagu Helo
February 28, 2019 Xafiiska Puntland 0
Madaxwayne kuxigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo waraysi gaar ah lala yeeshay ayaa markii ugu horreysay si adag kaga hadlay arin muddo laga sugayay inuu ka hadlo taas oo horay dad badan ay uga
Daawo:- Puntland oo mamnuucday in garoomada diyaaradaha lala galo hub.
Shirkii Golaha Xukuumadda Dowladda Puntland oo uu Shir-guddoominayey Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa looga hadlay arrimaha kala ah, Amniga Dalka, Dhismaha Goleyaasha Deegaanka, Habka Maareynta Xogta Maaliyadda, Kor u Qaadidda Xirfadaha Dhalinyarada
DAAWO VIDEO DEG DEG AH:Ragii Kufsiga iyo Dilka U Gaystey caaisha Galkacayo oo Lasoo Bandhigay”Dariskeeday Ahayeen Inay Xabaalan isku dayeen
February 28, 2019 marqaan 3
GAALKACYO : Waxaa gacanta lagu dhigay Raggii Falkii Foosha xumaa ee waxooshnimada ahaa kula kacay Caa’isho Ilyaas oo ahayd Gabar 12 jir ah oo ardayad ahayd. 4 Ruux ayaa ka danbaysay Dilka iyo Kufsiga Caa’isho,
Kenya oo hadda cidlo haawanaysa bilaawdayna Baryo ay ku doonayso in lala heshiiyo.
Dowladda Kenya ayaa hadda bilaawday in ay weji kale ubadasho murankii kala dhaxeeyay Somalia iyadoona dalbanaysa in laga saamaxo gafkii ay ku kacday. Kenya ayaa wax ka bedashay hadaladii hanjabaada ahaa ee maalmihii lasoo dhaafay
Daawo:- Ciidamadii laga keenay Tukarraq oo Gaalkacyo ka bilaabay Howlgal loogu magacday “Caasiha maxay galabsatay?”.
Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug waxaa ka bilaawday howlgal loogu magac daray maxaa loo dilay Caaish kaasi oo fulinayaan cutubyo katirsan Ciidanka Daraawiishta Puntland, gaar ahaan ciidamo laga keenay deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool. Howlgalkaan
Daawo:- Raiisal Wasaare xigeenka Somalia oo hadal taariikhi ah ka jeediyay gudaha Kulliyada Jaale Siyaad ee Muqdisho.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukumada Soomaaliya ayaa ka qeyb galay Munaasabad uu Taliska Ciidanka Xoogga Dalka kula wareegayay Kulliyadda Jaalle Siyaad ee Magaalada Muqdisho. Munaasabada ayaa waxaa goob joog ahaa Kusimaha Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka
DAAWO VIDEO:Meherka Cajiib Ah Khadar Keeyo Iyo Xaliima Gobaad Hees Loo Qaaday
February 28, 2019 marqaan 0
Iyadoo Baraha Bulshada Lagu hadal hayey Guurka Labada fanaan Muqdisho ee Khadar keeyo Iyo Xaliima Gobaad waxaa markii Ugu Horeeyey Baraha Bulshada Kusoo Bandhigay Fanaanka Khadar Keeyo oo cadeeyey. Khadar Keeyo Ayaa Qoraal Kooban oo
Jubbaland oo wariye kale kasoo masaafuriy Kismaayo “Fadeexad kale oo ku dhacaysa Axmed Madoobe”.
February 28, 2019 Xafiiska Puntland 2
Wariye Cabdirisaaq Cawil Cali oo ahaa Wariye ka howal galo Magaalada kismaayo. Wariyaha ayaa Waxaa uu u shaqeynayay TV Saab Xaruntiisa Kismaayo. Wariyaha ayaa ka mid ahaa Wariyaashii Shaqo Maalmedkooda ka Sameynayay Soo dhaweyntii Musharax
Daawo:-Askari Jooga Hargaysa oo Muuqaal laga duubay isagoo Jirdil ugaysanaya Wariyaal gudanaya waajibaadkooda shaqo “FADEEXAD”.
Sida uu baahiyay TV-ga Horn Cable waxaa tacadi Jirdil ah loo gaystay laba kamid ah shaqaalaha TV-ga kuwaas oo dhibaato kala kulmay askari katirsan Ciidanka Somaliland xilli ay howl shaqo kawadeen suuqa magaalada Hargaysa. Wariye
Dhagayso:- Waxgaradka Puntland oo ku baaqay in la toogto odaygii isku daya inuu badbaadiyo kooxihii kufsaday Caaisha Yar.
February 28, 2019 Xafiiska Puntland 3
Magalada Gaalkacyo ayaa waxaa todabaadkan kufsi iyo dil loogu gaystay Caa’sha Ilyaas Adan oo ahayd ardayad wax ka barta dugsiga Salaama, taas oo da’deedu ahayd 12 jir, waxaana falkaasi mid aragagax galiyey bulshada ku tilmaamay
Dhagayso:- Boliska Baladwayne oo ka hadlay dilal naxariis darro ah oo saacaidihii lasoo dhaafay kadhacay magaaladaasi.
Taliyaha Saldhiga Degmada Balad-Weyn Ee Xarunta Gobolka Hiiraan Oo Maanta Saxaafadda Kula Hadlay Gudaha Magaaladaasi Balad-weyn Ayaa Ka Hadlay Dilal Maalmihii Ugu Dambeeyey Siyaabo Kala Duwan Uga Dhacayey Balad-weyn Iyo Sidoo Kale Xaaladda Amni Ee
Cutubyo katirsan ciidamada AMISOM oo ka guuray saldhigyo ay ku lahaayeen Muqdisho.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho maanta oo khamiista ah ayaa sheegaya in ciidamo katirsan Howlgalka Midawga Africa ee AMISOM ay ka guureen saldhigyo mihiim ah oo ay ku lahaayeen Muqdisho. Ciidamadaan oo qayb ka ah
Deg-Deg:- Ciidamadii kasoo dagaalamay Tukarraq oo saakay lagu daad gureeyay Gaalkacyo.
Dowladda Puntland ayaa magaalada Gaalkacyo gelisay cutubyo aad u hubaysan oo ka tirsan Guutada lagu magacaabo CAANA-KA’DHAN ee ciidamada Daraawiishta Puntland si ay u soo celiyaan amniga Gaalkacyo oo maalmahan faraha ka baxay. Ciidamadan ayaa
Dhagayso:- Qowmiyadaha Ethopia ee kunool Boosaaso oo diidan in dalkooda dib loogu celiyo.
February 28, 2019 Xafiiska Puntland 1
Puntland ayaa bilaawday dib ucelinta qowmiyadaha Itoobiya ee mudada badan ku noolaa Magaalada Boosaaso, iyadoona tiradii ugu badnayd ee qowmiyadahaasi dib loogu celiyay Dalkooda. Dadka aan wali la celin ee kunool boosaaso ayaa ka walwalsan